Guddoomiyaha WADANI oo ka hadlay Tallaabadii KULMIYE Xisbiga kaga saareen C/Raxmaan C/Qaadir | FooreNews
Home wararka Guddoomiyaha WADANI oo ka hadlay Tallaabadii KULMIYE Xisbiga kaga saareen C/Raxmaan C/Qaadir
Hargeysa (Foore)- Guddoomiyaha Urur siyaasadeedka WADANI Md. C/Raxamaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) ayaa ka hadlay talaabadii 15-kii bishan xisbiga KULMIYE lagaga xayuubiyay xubinimaddii iyo Xilkii Guddoomiye Ku Xigeenkii labaad ee xisbiga talladda dalka haya ee KULMIYE.
Guddoomiyuhu wuxuu sidaasi ku sheegay shir jaraa’id oo uu maanta ku qabtay Magaaladda Hargeysa, waxaanu yidhi “Waxa kale oo fursadan uga faa’iidaysanayaa inaan kelmad kooban ka idhaahdo arrinta hadal-haynteedu badan tahay ee ku saabsan dhacdadii la xidhiidhay shirkiii Golaha Dhexe ee Xisbul-xaakimka Kulmiye iyo Guddoomiye ku-xigeenkii 2aad ee xisbigaas Md. Cabdiraxmaan Cabdilqaadir Faarax.
1. Waxaan rumaysanahay haddii aanu nahay urur-siyaasadeedka WADDANI in xisbi kasta ama urur siyaasadeed kastaa u madax bannaan yahay, mudan yahayna in lagu ixtiraamo xeerarkiisa iyo sida uu u anshax-marinayo madaxdiisa iyo xubnihiisa.
2. Hase yeeshee, wixii dibadda uga soo baxa xisbi ama urur siyaasi ah waxay saamayn ku leeyihiin bulshada oo waanay ka hadlaysaa dareenkeedana way ka bixinaysaa.
3. Mudane Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Faarax waa siyaasi caan ah oo reer Somaliland ah, waxa uu ku leeyahay taariikhda halganka Somaliland magac iyo maamuus wanaagsan. Waxa uu ka mid ahaa xubnaha hogaanka xisbiga Kulmiye oo waxa uu lahaa maamuuska saaraakiisha qaranku leeyihiin.
Xisbigu xaq buu u leeyahay inuu eedayn u soo jeediyo xubnihiisa. laakiin sida shuruucda caalamka, dhaqankeenna iyo diinteenaba ku cad qofka ama muwaadinka la eedeeyey waxa uu xaq u leeyahay in la siiyo fursad uu iskaga daafaco eedaha loo soo jeediyey. Fursadaas lama siin Md. Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Faarax, taasoo xad-gudub ku ah xuquuqda asaasiga ah ee muwaadinka. Wixii kale ee hagardaamo ah ee soo gaadhay Md. Cabdiraxmaan waanu ka xunahay.
4. Md. Cabdiraxmaan Cabdulqaadir oo baadhis caafimaad ugu baxay UK oo aan ku booqday gurigiisa ka hor intaan la qaadin, waxaan Illaahay uga baryayaa inuu siiyo caafimaad sariic ah.”
Previous PostMadaxweyne Siilaanyo oo Qaabilay Augustina Mahiga Next PostGolaha dhexe ee KULMIYE oo Sadqeeyay C/Raxmaan C/Qaadir Iyo Nuxurka qoraalkii Muuse Biixi